DHAGEYSO Wararkii ugu danbeeyay dagaal xoogan oo saake kasocda Tukaraq iyo warar shegaayo in Puntland | Allbanaadir News
DHAGEYSO Wararkii ugu danbeeyay dagaal xoogan oo saake kasocda Tukaraq iyo warar shegaayo in Puntland
May 24, 2018 - Aragtiyood
Dagaal u dhaxeeya Ciidanka Somaliland iyo Puntland ayaa saakay dib uga qarxay degaanka Tukaraq oo colaadiisa ay soo laa laabatay, dagaalkan wuxuu yahay mid culus oo hubka nuucyadiisa kala duwan la isku adeegsanayo.
Saraakiil ka kala tirsan labada dhinac ayaa xaqiijiyay dagaalkan, weli faah faahin badan oo dagaalkan la xiriirta lama hayo, maadaama hubka dhacaya oo aad u culus darteed xitaa aanan si wanaagsan la isaga maqli karin telefoonada.
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya degaanka Tukaraq ayaa waxa ay sheegayaan in labada dhinac ay kala qabsadeen gaadiid dagaal, ayna jiraan khasaare kala duwan oo dhinacyada soo kala gaaray.
Wariyeyaal ku sugan gobolka Sool ayaa soo sheegaya in labada dhinac ay gurmadyo kala duwan gaarayaan, iyada oo ay jirto in hub culus lala helay gaadiid Sahay iyo mid Shidaal oo labada maamul ay kala wataan, kuwaasi oo aagga uu dagaalka ka socda ku gubanaya.
Xaaladan kacsan ee saaka lagu soo waramayo inay ka taagan tahay degaanka Tukaraq ee Gobolka Sool, ayaa ah mid walaac cusub abuureysa, maadaama dhinacyada halkaasi isku haya dhawr mar baaq nabadeed loo diray.
Waxgaradka gobolka Sool ayaa ku guul darreystay iney Labada dhinac xabad joojin ku qanciyaan, sababtoo ah dhan walbo wuxuu sheeganayaa lahaanshiyaha degaanka Tukaraq.
Degaanka Tukaraq ee Gobolka Sool, ayaa waxaa gacanta ku haya ciidamada Somaliland oo goor hore ka qabsaday ciidankii Puntland ee halkaasi ku sugnaa.